“Dawladda iyo Shacabka Somaliland waxay si cad ugu sheegayaan Xukuumadda Xasan Shiikh in aanay soo fara gelin arrimaha Doorashooyinkayaga. Somaliland idiinkama baahna taageero”. Afhayeenka Madaxtooyadda | Berberatoday.com
“Dawladda iyo Shacabka Somaliland waxay si cad ugu sheegayaan Xukuumadda Xasan Shiikh in aanay soo fara gelin arrimaha Doorashooyinkayaga. Somaliland idiinkama baahna taageero”. Afhayeenka Madaxtooyadda
Hargeysa(Berberatoday.com)-WAR-SAXAAFADEEDUJEEDO Cambaarayn hadalkii Riyada iyo Indha-adayga ahaa ee ka soo yeedhay M/weyne Xasan Shiikh Maxamuud arrinta ay DP World ku maalgalinayso Dekedda Berbera::Jamhuuriyadda Somaliland waxay si weyn ula socotaa in Xukuumadda ka talisaVilla Somaliaoo uu ugu horreeyo M/weyne Xasan Shiikh Maxamuud ay si toos ah iyo si dadbanba gacanta ugula jiraan arrimo ka dhan ah nabadda, wada jirka, horumarka, dhaqaalaha iyo siyaasadda Qaranka Somaliland. Waxaannu ognahay in ay soo abaabulaan kooxo ay ugu talo-galeen inay khal-khal geliyaan nabadda iyo deganaanshaha Somaliland, isla markaana ay carqaladeeyaan tallaabo kasta oo uu Qaranka JSL xagga wanaagsan u qaado.
Sidoo kale, Dawladda Somaliland waxay si adag u cambaaraynaysaa hadallada xaqiiqada ka fog ee ka soo yeedhay Madaxweynaha Xukuumadda Soomaaliya ee uu ku sheegay in Dekedda Berbera ay tahay hanti ay leeyihiin waxa uu ugu yeedhay ‘Qaran Soomaaliyeed iyo Ummad Soomaaliyeed’. Hadalladani waxay markhaati cad u yihiin fara gelinta qaawan ee joogtada ah ee ay Xukuumadda ka talisaVilla Somaliaku hawso dalka, dadka iyo danaha Jamhuuriyadda Somaliland.
Jam. Somalilandwaxay Xukuumadda Muqdisho uga digaysaa fara gelinta, sheegashada iyo dacaayadaha raqiiska ee ay isku maaweelinayaan. Waxaanu idiinka digaynaa in aydaan marnaba ku mashquulin arrimaha dalkayaga, waayo Jam. Somaliland waa Qaran ku guulaystay inuu dadkiisa u horseedoNabad, Degenaansho, Horumar, Dimuqraadiyad iyo Dawlad Wanaag. Xukuumadda Muqdisho waxaanu leenahay ka korariyada aad ku nooshihiin oo runta u soo noqda!! Ka taliya aayaha ummaddiina iyo sidii aad dadkiina iyo dalkiina Nabad iyo Degenaansho aad ugu samayn lahaydeen.
Sidaa darteed, Dawladda iyo Shacabka Somaliland waxay si cad ugu sheegayaan Xukuumadda Xasan Shiikh in aanay soo fara gelin arrimaha Doorashooyinkayaga. Somaliland idiinkama baahna taageero, talo iyo tusaale midnaba:”Tiisaba Daryeelaa, tu kalena ku dara!!”